Sun, Mar 24, 2019 | 14:44:43 NST
11:44 AM ( 11 months ago )
काठमाडौं, वैशाख ३ – दोस्रो पटक प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त केपी शर्मा ओलीको दुई महिना पूरा भएको छ । गएको फागुन ३ गते दुई तिहाइ बहुमतसहित ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुनुभएको हो । सरकारले पाँच वर्षका लागि जिम्मेवारी पाएको छ ।
अघिल्लो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा नै सम्बृद्धिका ठूलाठूला सपना देखाएका ओलीले दोश्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि त्यस्तै योजनाका कुरा सुनाउन छोड्नुभएको छैन । हरेकजसो कार्यक्रममा उहाँ आफ्नो हँसिलो तरिकाले उहाँ यस्ता सपनाको पोको फुकाउने गर्नुहुन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको यो तरिकासंग केही सहमत छन भने केही काम गर्नुको साटो कुरामात्र गरेको भनेर ब्यंग्य पनि गरिरहेका भेटिन्छन्
सपना कार्यान्वयनको जग बसाल्ने कहिले ?
दुईतिहाइ मतसहित वाम गठबन्धनको सरकार बनेको छ । राजनीतिक संक्रमण पनि सकिएको छ । सबैको चाहना आर्थिक समृद्धि हो । प्रधानमन्त्री ओलीका भाषण सुन्दा अब केही त हुन्छ कि भन्ने लाग्छ । तर कार्यशैली त्यही गतिमा नहुँदा निराशा पनि देखिन्छ ।
अबको कार्यदिशा के हो ? र कहाँ पुगेर सकिन्छ भन्ने बाटो तय भैसकेको छैन । बितेका दुई महिनाले कार्यदिशाको खाका समेत कोर्न सकेको छैन । त्यसैले प्रश्न बाँकी नै छ, पुराना वाचा र नागरिकलाई देखाएका सपनाको कार्यान्वयनका लागि जग बसाल्न सुरु गर्ने कहिले त ?
अब ढीला हुन लागिसकेको छ । जति ढिला हुनेछ त्यति नै नागरिकलाई आशा भन्दा निराशाले बढी उकुसमुकुस बनाउनेछ ।
बाँकी छन् सपनाका चाङ
प्रधानमन्त्री ओलीले हरेकजसो कार्यक्रम र संवोधनमा नछुटाउने शब्द हो ‘विकासका अथाह सम्भावना छन्’ । हुन पनि हो नेपालमा जलस्रोत त पर्याप्त छ नै , हावापानी र वातावरण पनि अनुकुल नै छ । प्रकृतिले सबथोक दिएको छ ।
अहिले प्रधानमन्त्री ओलीले भाषण गर्ने र आशा देखाउने यी संभावनाका स्रोत यसअघि पनि छँदै थिए । तर राजनीतिक स्थिरता नहुँदा विकास भएन भने सबैले भन्दै आएका छन् । तर अवका दिनमा दोष दिनलाई राजनीतिक अस्थिरता भन्ने ठाउँ पनि रहने छैन । किनभने ओली नेतृत्वको सरकारलाई दुई तिहाइ बहुमत छ ।
मन्त्रिपरिषदमा पनि तुलनात्मक रुपमा आशालाग्दा अनुहार छन् । त्यसैले वाचा अनुसार कामको सुरुवात गर्ने बेला हो यो । वाचा गरे अनुसार घरघरमा ग्यास पाइप, पूर्व पश्चिम रेल, नेपाली ध्वजाबाहक पानीजहाज, युवा रोजगार, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्दै सुसासनको अनुभुति दिलाउनुपर्नेछ ।
घर घरमा बिजुली पुर्‍याउनुपर्नेछ भने रेलदेखि तेलसम्मका वाचाको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । यी काम तत्काल पूरा नहोलान्, तर गर्न सकिने अरु साना काम पनि थुप्रै छन् । जुन कामले नागरिकलाई राहत सँगै थप आशा जगाउनेछन् ।
पछिल्ला सकारात्मक प्रयास
सरकारले गाडीको सिन्डिकेट तोड्न गरेको पछिल्लो प्रयासलाई नागरिकले स्वागत गरेका छन् । त्यस्तै पूर्वसुरक्षा पदाधिकारीले घरेलु कामदार बनाइएका सुरक्षाकर्मीलाई फिर्ता हुन दिएको निर्देशनपनि सरकारको राम्रो निर्णय हो ।
यी त राम्रा तर साना कामका उदाहरण हुन् । यसरी नागरिकलाई राहत पुग्ने अरु धेरै काम गर्नुपर्नेछ । सरकारले अब केही गर्छ की भन्ने आशा नागरिकमा जगाइराख्न यस्तै सानातिना तर जनजीविकामा प्रत्यक्ष असर पार्ने काम गर्दै जानुपर्छ । ‘प्रचारबाजीका लागि गर्ने भाषण जति सहज छ विकास र संमृद्धि भने त्यति सहज विषय होइनन् । देशमा आर्थिक अनुशासानहीनता छ । प्रशासनिक संयन्त्र कमजोर छ । यसलाई पनि बदल्न आवश्यक छ’ राजनीतिक अर्थविद् हरि रोका भन्नुहुन्छ ।
अघिल्लोपटक ९ महिने कार्यकालका नागरिकले नाकाबन्दी झेल्नुपरेको थियो । ओलीले खानी उत्खनन्देखि पानीजहाज चलाउनेसम्मका योजना सुनाउनुभएको थियो । यिनै योजनालाई घोषणापत्रमा टाँसेर चुनावमा गएको वाम गठबन्धनलाई नागरिकले पत्याए । अनि मत दिएर अनुमोदन समेत गरिदिए ।
मतदाताले योभन्दा लगाउनुपर्ने अर्को गुन छैन होला । अब गुन तिर्नुपर्ने पालो सरकार र नेतृत्वकर्ता ओलीको हो । ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको दुई महिना बित्यो । भलै चुनौतीका चाङ होलान् । तर अवसर पनि छन् । ती अवसरलाई पहिचान गरी काम गर्नुपर्ने हुन्छ । सपना मात्रै देखाएर नागरिकलाई नपुग्ला भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ ।
घोषणापत्रमा समेटिएका नारा र अहिलेका वाचालाई नागरिकले केहि समयपछि उपलब्धि के भयो भनेर सोधीखोजी गर्नेछन् । त्यसैले वर्तमान सरकारले तत्काल गर्न सक्ने कामलाई अगाडि बढाउँदै ठूला विकास निर्माणका कामलाई पनि बाटो पहिल्याउन आवश्यक छ । आशा र हौसलाले मात्रै समृद्धि आउँदैन भन्ने बुझेर काम पनि सँगसँगै अगाडी बढाउनुपर्ने देखिन्छ ।
नयाँ ब्यवस्थालाई स्थापित गर्ने देखि श्वेतपत्रले देखाएको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई सुधार गरी मजबुत बनाउन आवश्यक छ । स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्र सरकारको जिम्मेवारी प्रष्ट पारेर अगाडि लैजानुपर्ने खाँचो छ । बितेका दुई महिनामा त खासै केही हुन सकेन । तर सरकारले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने अब गर्न सकिने साना कामको थालनी गर्नुपर्छ ।